Mpanamboatra sy mpamatsy paompy mpamono afo China Diesel | KAIQUAN
Fananganana sy fanafanana
Paompy maotera maotera XBC series dia fitaovana famatsian-drano novokarin'ny orinasanay araka ny fenitra nasionaly paompy GB6245-2006. Ampiasaina indrindra amin'ny rafitra famatsian-drano amin'ny solika, indostrian'ny simika, gazy voajanahary, toby famokarana herinaratra, tohodrano, tobin-tsolika, fitehirizana.
Paompy maotera maotera XBC series dia fitaovana famatsian-drano novokarin'ny orinasanay araka ny fenitra nasionaly paompy GB6245-2006. Ampiasaina indrindra amin'ny rafitra famatsian-drano amin'ny solika, indostrian'ny simika, gazy voajanahary, toby famokarana herinaratra, tohodrano, tobin-tsolika, fitehirizana, tranobe avo lenta ary indostria sy saha hafa. Amin'ny alàlan'ny foibem-panombanana mari-pahaizana momba ny vokatra mpamono afo (mari-pahaizana) an'ny sampana fitantanana vonjy taitra, nahatratra ny ambaratonga voalohany any Sina ny vokatra.
Ny paompy afo an'ny motera diesel dia azo ampiasaina hitaterana rano madio tsy misy sombin-javatra matevina eo ambanin'ny 80 ℃ na ranoka misy fananana ara-batana sy simika mitovy amin'ny rano. Raha ny fahitana ny fepetra amin'ny ady amin'ny afo, dia hodinihina ny fepetra miasa amin'ny famatsian-drano an-trano sy ny famokarana. Ny paompy mpamono jiro diesel XBC dia azo ampiasaina tsy amin'ny rafitra famatsian-drano tsy miankina irery ihany, fa koa amin'ny rafitra famatsian-drano iraisana amin'ny ady afo sy fiainana, fa koa amin'ny rafitra famatsian-drano ho an'ny fananganana, monisipaly, indostria ary fitrandrahana, famatsian-drano sy rano, sambo, asa an-tsaha ary fotoana hafa.
- Karazan-karazan-karazany marobe: paompy sentrifugal sedera tokana tokana, paompin-tsolika marindrano, paompy mitsentsitra avo roa heny, paompy lava sy karazana paompy hafa no voafantina ho an'ny singa, miaraka amina mikoriana sy tsindry marobe.
- Fandidiana mandeha ho azy: rehefa mahazo baiko fanaraha-maso lavitra ny tarika paompin-drano, na tsy fahombiazan'ny herinaratra, tsy fahombiazan'ny paompy elektrika ary fambara hafa (fanombohana) dia hanomboka ho azy ilay singa. Ny fitaovana dia manana fifehezana ny fizotran'ny fandaharan'asa mandeha ho azy, fahazoana data sy fampisehoana ho azy, famaritana ary fiarovana ho azy.
- Fampirantiana ny parameter parameter: asehoy ny satan'ny toetr'andro sy ny masontsivana ankehitriny momba ny fitaovana arakaraka ny tena fiasan'ny fitaovana ankehitriny. Ny seho an-tsehatra dia misy ny fanombohana, fiasa, fanafainganana, fanafainganana, (tsy miasa, hafainganam-pandeha feno) fanidiana, sns. Ny fari-pandrefesana dia misy hafainganana, tsindry solika, mari-pana amin'ny rano, hafanan'ny solika, herin'ny bateria, fotoana fiasan-komulative sns.
- Fampandrenesana fanairana: fanombohana fanairana tsy fahombiazana, fanairana ambany tsindry solika ary fanakatonana, fanairana amin'ny mari-pana amin'ny rano avo, fanairana amin'ny hafanan'ny solika, fanairana amin'ny alàlan'ny herinaratra ambany, fanairana ambany haavon'ny solika, fanairana be loatra ary fanidiana.
- Fomba fanombohana isan-karazany: fanombohana sy fijanonana fanakanana eo an-toerana, fanombohana lavitra ary hampiato ny fanaraha-maso ny foibe fanaraha-maso, manomboka ary mihodina miaraka amin'ny herin'ny mains.
- Famaritana fanehoan-kevitra momba ny toe-javatra: famantarana ny asa, tsy fahombiazan'ny fanombohana, fanairana feno, fanakatonana famatsiana herinaratra fanaraha-maso ary teboka famantarana ny valin'ny fanehoan-kevitra.
- Fandoavam-bola mandeha ho azy: amin'ny standby mahazatra, ny rafitra fanaraha-maso dia hitsingevana avy hatrany ny bateria. Rehefa mandeha ny masinina dia hampandoa ny bateria ny mpanamboatra milina diesel.
- Haingam-pandeha azo ovaina: raha tsy mifanaraka amin'ny tena takiana ny fikorianan'ny rano sy ny lohan'ny paompy, dia azo ahitsy ny hafainganam-pandehan'ilay motera diesel.
- Hetsika fanombohana bateria indroa: rehefa tsy manomboka ny bateria iray dia hiova bateria hafa ho azy.
- Batterie maimaimpoana ho an'ny fikolokoloana: tsy mila manampy electrolyte matetika.
- Palitao rano alohan'ny fanafanana: mora kokoa ny manomboka ny unit raha ambany ny mari-pana manodidina.
Hafainganana: 990/1480/2960 rpm
Haavo isan-karazany: 10 ~ 800L / S
Isan'ny tsindry: 0.2 ~ 2.2Mpa
Fanerena atmosfera manodidina:> 90kpa
Temperature manodidina: 5 ℃ ~ 40 ℃
Ny hamandoan'ny rivotra: ≤ 80%
Teo aloha: Paompy famonoana afo miady amin'ny axis lava XBD
Manaraka: W Seeries Fitaovana fanerena azo antoka
Paompy amin'ny ady amin'ny afo amin'ny diesel
Paompy miady amin'ny tafika an-dranomasina diesel
Paompy diesel ho an'ny rafitra ady amin'ny afo
Paompin-drano Diesel miady amin'ny afo
Fampisehoana vokatra Series KQTL
W Seeries Fitaovana fanerena azo antoka
Paompy afo amin'ny sehatra tokana XBD